रविन्द्र मिश्रलाई लाग्यो ४४० भोल्टको झड्का, सिंगो पार्टी नै अर्को पार्टीमा प्रवेश ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
रविन्द्र मिश्रलाई लाग्यो ४४० भोल्टको झड्का, सिंगो पार्टी नै अर्को पार्टीमा प्रवेश !
माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का लागि अर्को खुसीको खबर थपिएको छ । नेकपा एसले अध्यक्ष नेपालसँग विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डेको समूहले भेटवार्ता गरेको हो । बुधबार विवेकशील साझाका संयोजक पाण्डेको टोलीलाई अध्यक्ष नेपालले आफ्नो निवासमा बोलाएर आफ्नो पार्टीमा आउन आग्रह गरेका हुन् ।